Nhoroondo yekambani - Shandong Gaoji Viwanda Machinery Co., Ltd.
Umbwa muna 1996, Shandong Gaoji Industry Machinery Co., Ltd. iri nyanzvi R & D pamusoro maindasitiri zvoga kudzora michina, uyewo mugadziri uye mugadziri otomatiki michina, pari isu tiri guru mugadziri uye kwesainzi hwaro hweCNC busbar kugadzira muchina muChina .
Kambani yedu ine simba rakasimba rehunyanzvi, rakapfuma rekugadzira ruzivo, yepamusoro maitiro ekudzora, uye yakakwana mhando kudzora system. Isu tinotungamira mune ino indasitiri indasitiri kuve inosimbiswa neiyo ISO9001: 2000 yemhando yepamusoro manejimendi system. Iyo kambani inovhara nzvimbo inopfuura 28000 m2, inosanganisira iyo yekuvaka nzvimbo inopfuura 18000 m2. Iyo ine maseti anopfuura zana nemakumi maviri emakumi maviri emakumi maviri emakumi maviri nematanhatu ekugadzira michina yeCCC uye yepamusoro-chaiyo yekuona michina inosanganisira CNC machining centre, hombe-saizi portal yekugaya muchina, CNC yekukomberedza muchina, nezvimwewo, ichipa chinogadzirwa chinokwana seti mazana masere ezviteedzana zvemabhazi ekugadzirisa michina pagore.
Ikozvino kambani ine vashandi vanopfuura mazana maviri vanosanganisira vanopfuura gumi neshanu% einjiniya matekinoroji, nyanzvi dzinosanganisira dzakasiyana siyana senge zvinhu sainzi, meinjiniya, maitiro ekugadzirisa macomputer, zvemagetsi, ehupfumi, manejimendi ruzivo uye zvichingodaro. Kambani iyi yakateedzana kukudzwa se "Hi-Tech Enterprise yeShandong Province", "Hi-Tech Chigadzirwa cheJinan City", "Kuzvimirira Kugadzira Chigadzirwa cheJinan Guta", "Jinan Guta Rakabudirira uye Rakatendeka Enterprises", uye nhevedzano yemamwe mazita.
kambani yedu ine kugona kwakasimba mukugadzirwa kwechigadzirwa uye kusimudzira, kuve neyakawanda patent matekinoroji uye yekodhi yekombiki tekinoroji. Inotungamira indasitiri nekutora pamusoro pe65% mugove wemusika mumusika wepamba processor musika, uye kutumira kunze michina kune gumi nemaviri nyika nematunhu.
Pasi pechidziro cheMusika-wakatarisana, Hwakadzika midzi, Kugadziriswa-kwakavakirwa, Sevhisi-yekutanga,
isu tinokupa nemoyo wese nemhando yepamusoro zvigadzirwa uye yekutanga-kirasi sevhisi!
Welcome to nesu!